Taariikhda dalka Sacuudi Carabiya - BBC Somali
Taariikhda dalka Sacuudi Carabiya
23 Jannaayo 2015
Sanadkii 1871 -dii ayaa boqortooyadii uthmaaniyiinta waxa ay la wareegtay gobolka Xasa, waxaana labaatan sano kaddib oo ku beegneyd 1891-kii qoyska Rashidi ayaa qoyska Al-Sacuud u musaafuriyay Kuwait.
1902 -dii ayuu Abd-al-Aziz Bin-Abd-al-Rahman Bin-Faysal Bin-Turki Bin-Abdallah Bin-Muhammad Al Saud oo loo yaqiinay Ibnu Sacuud waxa uu la wareegay gacan ku haynta Riyaadh, waxa uuna Sacuudi Carabiya dib u soo celiyay qoyska Al-Sacuud.
1912 -kii waxaa la aas-aasay ikhwaanka, durbadiina waa uu faafay waxa uuna taageero muhiim ah siinayay Abd-al-Aziz.
1913 -kii Xasa waxaa cuthmaayiyiinta dib uga qabsaday Abd-al-Aziz, waxa uuna sanadkii 1921 - kii qaatay magaca ah suldaanka Najda.
Muddadii u dhaxeysay 1924-tii ilaa 25-tii, waxaa la qabsaday boqortooyadii Xijaaz oo hooy u ahayd magaalooyinka barakeysan ee maka iyo madiina
1926 -dii Abd-al-Aziz waxaa magaalada makah lagu dhawaaqay in uu yahay boqorka Xijaaz.
Sanaddadii u dhaxeeyay 1928-dii ilaa 1830 -kii Ikhwaanka ayaa ka soo hor jeesaday Abd-al-Aziz sababo la xiriira casriyeynta gobolka iyo waliba tirada dadka aan muslimiinta ahayn oo halkaasi ku sii badanayay, waxaana markii dambe ay guusha raacday Abd-al-Aziz.
Bishii September sanadkii 1932-dii waxaa la mideeyay deegaanada uu xukumo Abd-al-Aziz, waxaana loo bixiyay boqortooyada sucuudi carabiya, waxana la boqray Abd-al-Aziz.
1938 -kii saliida uu dalkaasi qaniga ku yahay ayaa la helay, waxaana billowday soo saaridda saliiddaasi, waxaana maamulayay shir uu mareykanka maamulo oo lagu magacaabo Aramco.
Bishii November 1953-dii waxaa geeriyooday boqor Abd-al-Aziz , waxaana dhaxlay xalal sugaha oo ahaa sacuud.
Bishii November 1964-tii boqor sacuud waxaa afgambiyay walaalkii Feysal.
1972 -kii Saudi Arabia waxa ay boqolkiiba labaatan heshay wax soo saarka saliidda ee shirkaddii Aramco, waxaana yaraaday awooddii mareykanka ee shirkaddaasi.
1973 - kii Saudi Arabia waxa ay hor mud ka noqotay cuna-qabatayn dhanka saliidda ah oo ka dhan ah waddamada reer galbeedka ee israaiil ku taageeray dagaalkii Oktoobar eek a dhanka ahaa masar iyo suuriya.
Bishii march 1975-tii boqor feysal waxaa khaarijiyay wiil uu dhalay walaakii, waxaana dhaxlay walaalkii Khaalid, waxaa uuna markii dambe geeriyooday bishii june Sanadkii 1982-kii, waxaana dhaxlay walaalkii Fahad.
Sanadkii 1990 -kii Saudi Arabia waxa ay cambaareysay weerarkii ciraaq ay ku qaaday Kuwait, waxa ayna weydiisatay mareykanka in uu arrintaasi farageliyo, waxa ayna sidoo kale sanadkii 1991 -kii ku lug la hayd dagaal dhanka cirka iyo dhulka ah oo Ciraaq lagu qaaday, kaasi oo lagu xoreeyay Kuwait.
1994 -tii Osama Bin Laden ayaa dhalashadii sacuudiga laga xayuubiyay.
11-kii September 2001-dii 15 ka mid ahaa 19-kii nine e ka qeyb qaatay weerarkii lagu qaaday New York iyo Washington ayaa noqday muwaadiniin sucuudi ah, waxaana saddex bilood kaddib uu boqor fahad ku dhawaaqay cirib tirka argagixisada.
Bishii November 2002 - dii, sacuudigu waxa uu mamnuucay in mareykanka uu isticmaalo xarumihiisa si loo weeraro ciraaq.
April 2003 -dii mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu la baxayo dhammaan ciidamadiisa ku sugnaa sucuudiga.
Bishii October 2011-kii e Nayef bin Abdulaziz al Saud ayaa loo magacaabay dhaxal suge kaddib markii uu geeriyooday dhaxal sugihii hore Sultan bin Abdulaziz al Saud.
June 2012-kii waxaa geeriyooday dhaxal suge Nayef, waxaana dhaxlay salmaan oo ahaa wasiirkii gaashaan-dhigga, waxaana January 2015-ka uu dhaxalka boqortooyada la wareegay kaddib geeridii Boqor Cabdalla.